मुर्तिकलामा भबिष्य खोज्दै चतुरलाल ! « Channel Np
मुर्तिकलामा भबिष्य खोज्दै चतुरलाल !
प्रकाशित मिति : Wednesday, May 29th, 2019 at 8:51 PM
उर्लाबारी । मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका वडा नं. ४ का चतुरलाल राजवंशी मुर्तिकलामा अब्बल छन् । बुवा महिचन राजवंशी र आमा चपनी राजवंशीको कोखबाट जन्मिएका उनी विभिन्न देवताहरु र जनावरहरुको दुरुस्तै आकृति झल्किने मुर्ति बनाउने अव्वल क्षमता राख्छन् ।
३८ बर्षीय राजवंशीले कुनै साधन र सैद्धान्तिक ज्ञान विनै मुर्ति बनाउने गरेका छन् । कसैले अर्डर गरे मात्र मुर्ति बनाउने गरेका राजवंशीले गतिलो अवसर र आर्थिक सहयोग पाए व्यावसायिक रुपमै मुर्ति निर्माण उद्योग सुरु गर्ने इच्छा रहेको बताए ।
२५ वर्ष अघिदेखि मुर्ति वनाउन थालेका उनले भारतको सिक्किम, नेपालको विभिन्न भागमा पुगेर मुर्ति बनाइसकेका छन् । विभिन्न मन्दिर, धार्मिक स्थल, पर्यटकीय स्थलहरुका लागि २ हजार भन्दा वढी मुर्तिहरु निर्माण गरिसकेका छन् ।
घरेलु श्रोत र साधनको प्रयोग गर्दे निकै सस्तोमा मुर्ति बनाउने राजवंशीले राम्रो अवसर पाए आफू भित्रको ज्ञानलाई दुनियाको अघि फैलाउने धोको रहेको बताए । मासिक रुपमा अवस्था हेरी ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म कमाउँदै आएको उनको भनाई छ ।
राजवंशीले देवी देवताको मुर्ति मात्र होइन विभिन्न व्यक्तिहरुको सालिक र जनावरहरुको प्रतिमा पनि वनाउने गरेका छन् । देवी, देउता, राष्ट्रिय विभूति र मानिसहरुको शालिक गरी उनले थुप्रौ मुर्तिहरु कँुदिसकेका छन् ।
यस क्षेत्रमा हात हालेको बताउने उनी पित्तल, तामा, जस्ता लगायतबाट बनाइने परम्परागत मूर्तिकला मात्रै होइन ढुङ्गामा कँुदेर पनि राम्रा मुर्ति तयार पार्छन् । विभिन्न प्रकारका मुर्तिहरु वनाउनका लागि राजवंशीसंग कुनै प्रविधिको साथ र साधनहरु पनि छैनन् तर उनले बनाएका निकै सुन्दर र कलात्मक मुर्तिहरु देखेर सर्वसाधारणहरु दंग पर्ने गरेका छन् ।
आफ्नो अघि कुनै देवता, जनावर या मान्छेको फोटो राखेर दुरुस्तै मुर्ति बनाउने राजवंशीको कलाले सबैलाई मोहित पारेको छ । सानै देखि चित्रकला र मुर्तिकलामा निकै रुचि भएका राजवंशी अहिले अव्वल मुर्तिकारको रुपमा परिचित हँुदै गएका छन् ।